Articles Christian Life | Calvary Burmese Church | Page 2
March 3, 2011 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
သီချင်းစာသား – Charlotte Elliott ၁၇၈၉-၁၈၇၁
တေးရေး – ၀ီလျံ၊ ဘီ၊ ဘရက်ဘာရဂီ ၁၈၆၁ – ၁၈၆၈
ယေရှုကလည်း၊ ငါသည် အသက်မုန့်ဖြစ်၏။ Continue reading →
February 28, 2011 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
လောက၌ လူတစ်ဦးအဖို့ အရေးကြီးဆုံးသည် ဖြစ်လေရာ ဘ၀၌ ရောင့်ရဲ တင်းတိမ် နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူပျိုတစ်ဦးက “အကယ်၍ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရင်၊ နောင်အချိန်မှာ အင်မတန် လှပ ချောမောတဲ့ မိန်းကလေးတွေ မွေးဖွါး လာဦးမယ်၊ အဲဒီအချိန်ကျရင် ဇနီးကို ကွာရှင်းလို့ရမှာ မဟုတ် တော့ဘူး Continue reading →
ကောင်းချီးမင်္ဂလာ (၈) ပါး
January 12, 2011 September 30, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Eight Blessings သို့ဖြစ်၍သခင်ယေရှုဟောကြားလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ကြီးမြတ်ခြင်း၊ အရေးကြီးခြင်းအကြောင်းများကို သတိရလျက် မိမိသည် ဘာမျှမဟုတ်ကြောင်း၊ ချို့တဲ့၍မပြည့်စုံသူဖြစ်ကြောင်းကို သိမြင်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏ ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်စာမျက်နှာများကိုဆက်ဖတ်ရန် mouse ကို scroll လှိမ့်ပါ။
ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲအပေါ်က ◄ 1 / 22 ► ပုံမှာ ► (Next Page)ကိုနှိပ်ပါ။
January 4, 2011 September 30, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Real Followerယေဘုယျအားဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် ကိုက်ညီသော်လည်း လူတိုင်းအတွက်မူ အဆင်ပြေချင်မှပြေမည်။ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် လူတိုင်း၏ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ William McDonold ရေးသား၍ ဆွီးဆွီးကျော်ဘာသာပြန်သော တပည့်တော်စစ်စစ် စာအုပ်မှကောက်နုတ်တင်ပြထားပါသည်။
ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲအပေါ်က ◄ 1 /7► ပုံမှာ ► (Next Page)ကိုနှိပ်ပါ။
တပည့်တော်စစ်စစ် (True Followers)
December 7, 2010 September 30, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
William McDonold ရေးသား၍ ဆွီးဆွီးကျော်ဘာသာပြန်သော တပည့်တော်စစ်စစ် စာအုပ်မှကောက်နုတ်တင်ပြထားပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင်တပည့်တော်စစ်စစ်များ လိုက်နာရမည့်ကျမ်းပိုဒ်များစွာ ရှိသော်လည်း မသက်ဆိုင်သကဲ့သို့ ဖာသိဖာသာ နေတတ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သည် မပြည့်စုံသူဖြစ်သော်လည်း ပြည့်စုံသော ကိုယ်တော်၏ အလိုတော်ကိုချီးမွမ်းထိုက်ပါသည်။
True Follower http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=44846193&access_key=key-zm6iui90olmdh3p7ynt&page=1&viewMode=list
လက်တုန့်ပြန်ခြင်း (ဂလဲ့စားချေခြင်း) ၃
December 6, 2010 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
မောရှေ၏ ပညတ်၌ “မိတ်ဆွေ များကိုချစ်ပြီး၊ ရန်သူ များကို မုန်းပါ ဟုဆိုသည်။ သခင်ယေရှုကမူ သင်၏ရန်သူကိုတို့ကို ချစ်ကြလော့” ဟုဆိုသည် Continue reading →
လက်တုန့်ပြန်ခြင်း (ဂလဲ့စားချေခြင်း) ၂
December 3, 2010 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
၂။ တရားစွဲဆိုခြင်း(မဿဲ ၅း၄၀)
သင့်အင်္ကျီကိုယူလို၍ တရားတွေ့သောသူအား သင့်ဝတ်လုံကိုလည်း ယူစေခြင်းငှာအခွင့်ပေးဦးလော့။
ဤကျမ်းစာကို အတိအကျလိုက်နာပါက လူသားများသည် အ၀တ်အစားမပါပဲနေဖို့ရန်သာ ရှိပါသည်။ Continue reading →
သူ့မျက်စိ ကိုဖျက်လျှင် ကိုယ်မျက်စိ ဖျက်ခြင်းကို ခံစေ။ သူ့သွား ကိုချိုးလျှင် ကိုယ်သွား ချိုးခြင်းကိုခံစေ ဟူသောပညတ်စကားကို သင်တို့ကြားရပြီ။ Continue reading →
ကျိန်ဆိုခြင်း (Rev. Dr. Simon Pau Khan En)
November 19, 2010 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
မောရှေသည် မဟုတ်မမှန်ဘဲ ကျိန်ဆိုခြင်းကို တားမြစ်၍ သခင်ယေရှု ကမူ မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ ကျိန်ဆိုခြင်းကို တားမြစ်သည်။ Continue reading →
November 12, 2010 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ကောက်နှုတ်ချက်များ ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂၀၁၀ အောက်တိုဘာလထုတ် မြန်မာ့တမန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ယုံရှမ်း (ရှင်ဘွေယန်မြို့) က ကမ္ဘာ့ထင်ရှားကျော်ကြားသူများရဲ့ မှတ်ချက်ကို Continue reading →
November 3, 2010 September 30, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
၂၀၀၅ ခုဖေဖော်ဝါရီလ ကရာနီအသင်းတော်၏ ရှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နှင့် Aroma ၀ိညာဉ်ရေးစာစောင်၏ တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ထုတ်ဝေသောစာစောင် မှသိက္ခာတော်ရဆရာဦးမျိုးမော်၏ (သင်ဘယ်လိုအသင်းသားလဲ?)
စာလုံးများသေးလွန်း၍ဖတ်မရဖြစ်လျှင် fullscreen ကို click ပြုလုပ်ရန်။
Aroma 022005 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=40855284&access_key=key-2h2h318rygwibyej2i76&page=1&viewMode=list
89,186 Since July 2011
ဒုတိယအကြိမ် ဧ/သ သင်တန်း